Biography yokomoya Dr Joseph D’Allende
Kutheni kuthiwa luKakayi Apostolic Ministries
Umbono kunye negunya
Ukuqhubela phambili 2016
Mayelo e Youtube
Ukubhaptizwa Into The uMoya
Yintoni isesandleni sakho?
SIYANAMKELA eKalvari Apostolic Ministries
Calvary Apostolic Ministries Uvukile nguThixo uSomandla njenge Church Ubulungiseleli Para ukuncedisa kuMzimba kaKristu yokuphucula abangcwele basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo ukuze lakheke kuMzimba kaKristu (bona Efese 4:12).
Isigunyaziso samkelayo neNkosi yethu uYesu Kristu, iya kuzaliseka ngokuthi uncwadi, neziviwa-zibonwa kunye Ubuso wethu Book Page. Ke injongo yethu ukusebenza kunye mahlelo Church and Local Independent Churches ngenxa ukwandiswa kuMzimba kaKristu, ke ngoko esiyenzileyo zonke izinto zethu ezikhoyo ngokukhululekileyo. iividiyo zethu, amanqaku neencwadi ukuze iikopi zaso zize zisasazwe kunye nemiqathango ezimbini ezinkulu; ke ungaze kuthengiswa zonke iividiyo, amanqaku kunye iincwadi ukugcina Kalvari Apostolic Ministries Logo nedilesi. Iindleko Ukukopa nokuhambisa izinto zethu ezenziweyo ukuze iqokelelwe, kodwa hayi inzuzo.
Calvary Apostolic Ministries iinkolelo Faith kunye Statement Mission zichazwa ukugcina ubudlelwane bokusebenza obulungileyo kunye kuMzimba kaKristu yaye ke mabangapheleli imfundiso yethu Imfundiso wethu ukweyisela hayi ngenjongo calula abanye abaneenkolelo Imfundiso. Akukho mbalelwano ekuya kungenwa kuyo ngokuphathelele abaneenkolelo ezahlukileyo Imfundiso.
Siyathemba ukuba ubulungiseleli iya kuba yintsikelelo kuMzimba kaKristu.
iintsikelelo zikaThixo intle
Dr uYosefu Dolores D’Allende
Zonke lomxholo kule sayithi eyeye eKalvari Apostolic Ministries kwaye umsebenzi original ngk Joseph D'Allende, kwaye kukotshwe okanye ekwabelwana, kodwa ukuba ilungiswe okanye wathengisa ngayo nayiphi na indlela ngaphandle kwemvume Dr Joseph D ' Allende. Nceda musa ukufikelela kule website ukuba awuvumelani nale migaqo nemiqathango.
UBIZO INGXELO eKalvari Apostolic ubuPhathiswa IBandla esasekwa UYesu Kristu nguThixo yabamisela isithuthi ukuba sikuzalise abangcwele basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo ukuze lakheke kuMzimba kaKristu ehlabathini (Mateyu 16:18; Marko 16: 14.15; Efese 4: 8-13). Ngoko Calvary Apostolic Ministries amiswe nguThixo uSomandla uya kuzama ngamandla ngobabalo lukaThixo (2 Korinte 12: 9) kunye Amandla oMoya oyiNgcwele (Zekariya 4: 6) ukuze Read More ...
Kufuneka amanqaku kwi website yethu ukuba ufunde Dr Joseph D’Allende. Ezi ikakhulu yokugubungela izihloko ukuba iividiyo zethu ekufundiseni.
Mfono Dr Joseph D’Allende: (+64) (9) 4169 942 ( Auckland, New Zealand) okanye ungasebenzisa ifomu zoqhagamshelwano ngezantsi ukuthumela i email.
Warning: fopen(/home2/calvary/public_html/xhosa/wp-content/plugins/hit-counter/css/.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home2/calvary/public_html/xhosa/wp-content/plugins/hit-counter/hc.php on line 216
Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/calvary/public_html/xhosa/wp-content/plugins/hit-counter/hc.php on line 217
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/calvary/public_html/xhosa/wp-content/plugins/hit-counter/hc.php on line 218